daadah.com - fuuq-celin
Posts Tagged ‘fuuq-celin’
Fuuq-baxa waxaa luuqada caafimaad lagu yiraahdaa Dehydration oo macnaheedu yahay marka jirka uu ku yaraado dheecaanka ama biyahu. Culayska jirka carruurta waxaa lagu qiyaasaa in 70% ay yihiin biyaha jirka ku jira. Sida caadiga ah qofka aadamiga ah wuxuu lumiyaa biyaha jirka ku jira marka uu kaadinayo, saxaroonayo iyo marka uu dhididayo. Waxaa kale oo
Shubanka laatiinka waxaa lagu yiraahdaa Diarrhea oo ka yimid eray Giriig ah oo macnihiisu yahay Dareerid (Dia=”flow” iyo -rrhea =”through”). Macnaha waxa weeye waa marka qofku dhigo saxaro jilicsan oo biyo u badan marar badan oo is-xiga. Shubanka waxaa keena saamayn caabuq ama caabuq la’aan. Sidee baan ku ogaan karaa in cunnugayga uu hayo
© 2018 daadah.com